16 / 08 / 2019 | RayHaber
Maalinta: 16 August 2019
Metro Istanbul ayaa u dabaaldegaysa Sannad-guurada 31
Metro Istanbul, 16 Bishii Agoosto 1988 waxay ku bilaabatay socdaalkeeda iyada oo lagu kobcinayo in ka badan 2 milyan oo rakaab ah iyo shaqaalaha 2.700 maalin kasta. Safarka Metro Istanbul ee 30 ee shabakadda nidaamka tareenka si joogto ah [More ...]
Soojiidashada Bursalılar! Safaradii Hore ee Bursaray
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, mashruuca ugu weyn ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada Bursaray'da waxay dardar galisay shaqada waxay kordhineysaa awooda 60 boqolkiiba. Nidaamka cusub ee calaamadaynta, waqtiga sugitaanka ayaa la yareynayaa daqiiqadaha 2. Marka la eego baaxadda daraasadahaan 20-22 Agoosto [More ...]
Gegada dayuuradaha ee Istanbul waxay noqotay albaab xuduudeed hawada oo rasmi ah oo u furan iridaha caalamiga ah iyo kuwa ka baxa. Go'aanka Madaxweynaha ee arinta ayaa lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah. Marka loo eego, soo-gelitaanka garoonka caalamiga ah ee madaarka Istanbul wuxuu u furan yahay albaab xuduudeed hawada oo joogto ah [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO) waxay sii wadaysaa Mashruuca Horumarinta Tartanka Caalamiga ah (UR-GE) ee waaxda jirka, mid ka mid ah laamaha ugu muhiimsan ee waaxda baabuurta. Mashruucu wuxuu ujeedadiisu tahay inuu xoojiyo tartannada qaybta waaxda adduunka. Wasaaradda Ganacsiga [More ...]
Xaraashka jidka weyn ee isku xidha Kosovo iyo Albania ayaa dareen diidmo leh ka helay labada qof ee Kosovo iyo Albaniyiinta. Si kastaba ha noqotee, jidadka waaweyn ee Kosovo ayaa la rajaynayaa in lagu soo oogo mar dambe. Wasiir ku-xigeenka Kaabayaasha Rexhep Kadriu [More ...]
Daabacaadda Shaqada la taaban karo ee Wadooyinka Laydhka ah ee Bixinta Helitaanka Xeebta ee Rize
Wadooyinka Rize ee ka yimaada bartamaha illaa xeebta ayaa dib loo hagaajiyay waxaana laga badbaadiyay in ay dhoobo noqdaan shaqada la taaban karo ee cadaadiska. Marka la eego baaxadda dayactirka iyo howlaha dayactirka oo ay bilaabeen kooxo ka socda Dowladda Hoose ee Rize oo ka kala yimid meelo kala duwan oo magaalada ah, [More ...]
Xarunta tareenka ee Derbent taariikhi ah, oo la qaban doono May oo la filayo inuu furmo bilowga Juun, ayaa ku hadhay dhamaadka Oktoobar ka dib bilo dib loo dhigay. [More ...]
Degmada Bilecik waxay ku sameysay nadiifin dhameystiran oo fasax ah dhamaan 6 K Smart Stops ee magaaladeena. Ka sokow howlaha nadiifinta ah ee laga fuliyey Bilecik oo dhan si ay uga dhigaan muwaadiniinteena inay ku qaataan nolol caafimaad leh oo tayo leh [More ...]
Helitaanka Naafada ee Eskisehir
Dawlada Hoose ee Magaalada Eski Metroehir, oo ahmiyad weyn u leh helitaanka marin kasta oo magaalada ah isla markaana aan ilaawin muwaadiniinta naafada ah mashaariicda ay fulisay, ayaa sidoo kale meesha ka saaraysa carqaladaha adeegyada gaadiidka ee ay ku bixiyaan bilaash. Loogu talagalay muwaadiniinta naafada ah [More ...]
Mushaharka Shaqaalaha TCDD Meeleyn Meeqo Lacag ah? : Qoritaanka shaqaalaha TNUMD Sannadka TNUMD wuxuu sii soconayaa iyada oo mushaharka shaqaalaha sanadkan ay sidoo kale cajiiba yihiin. Shaqaalaha TCDD by 2019 [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso sidii loo fududeyn lahaa gadiidka muwaadiniinta ku nool tuulooyinka. Macnaha guud, buundada iyo isku xirka wadada kale ee udhaxeysa xarunta degmada Karamürsel iyo Tuulada Semetler ee Waaxda Arimaha Sayniska [More ...]
Feebar Adkeysi Boztepe Cable Car iyo Reverse House
Dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajnabiga ah, kuwaas oo noqday xarunta dareenka ee Cable Car Line iyo Inverse House oo dalxiis ku yimid booqashada Ciidul Adxaa. Reverse House iyo khadka gawaarida fiilada ee bixiya gaadiid Boztepe waxay kordhiyaan soo jiidashada magaalada. [More ...]
Maanta Taariikh: 16 Agoosto Wadada Tareenka ee Baqdaad ee Ankara ee 1908
Maxaa maanta ku dhacay taariikhda tareenka? Maanta oo ku taal Taariikhda 16 AUGUST 1838 Heshiiska Ganacsiga ee Balta wuxuu u fududeeyey maal-gashadayaasha reer Yurub inay ka ganacsadaan oo ay maal-gashadaan dhulka Ottoman. 16 August 1917 Sheriff Hussein ee fallaagada 4 [More ...]